Warqadda wareejinta kuleylka waxaa sidoo kale loo yaqaannaa daabacaadda warqad dahaarka leh. Waraaqda wareejinta kuleylka waa lakab rinji cad ah dusha sare ee warqadda salka, aad loo cadaadiyay loona shaqeynayo, oo loo qeybiyay hal dhinac iyo laba dhinac. Waxaa inta badan loo isticmaalaa daabacaadda dejinta, daabacaadda silig ganaax ah, sida sawirka sare ee alb ...
Si wada jir ah loola dagaallamo COVID-19
Qaadashada badbaadada shaqaalaha iyo xasilloonida bulshada mas'uuliyadeeda, Fangda waxay si firfircoon uga jawaabtaa hawlgalinta qaran, waxay si adag u fulisaa shuruudaha siyaasadda waxayna si dhakhso leh u bilawdaa tallaabada. Intii lagu gudajiray howlgalka kahortaga iyo xakamaynta cudurada faafa, shaqaaluhu way wada shaqeeyeen w ...
Fangda Core Tech – Koollo Kulul
Xabagta Kulul waa xabag caag ah. Xaaladdeeda jir ahaaneed waxay isku bedeshaa heerkulka heer kulka gaar ah, halka walxaha kiimikada ah aan isbeddelin. Waa mid aan sun ahayn, ur lahayn oo bey’ada u fiican. Sababtoo ah alaabteeda waa adag tahay, ku habboon tahay baakadaha, gaadiidka, kaydinta ...